Ifektri yasePellet kumaGramu - Kinne Maskinteknik AB
Ifektri yasePellet eGrem.
I-PDF ngesiSwidi enezithombe nezincazelo
I-PDF ngesiNgisi ngezithombe nemininingwane
Le fektri ye-pellet itholakala eSegmon, 8 km ukusuka eGrum endaweni yezimboni yaseKyrbyn eduze komngcele waseNorway futhi yaqala ukwakhiwa ngo-2001.
Indawo yezimboni inezakhiwo ezivela kumgamu wangaphambili wamapulangwe owadilizwa ngawo-1970s.
Ama-V-Pellets asebenzisa izakhiwo ezine ekusebenzeni kwayo.
ifektri okuyisakhiwo esanda kwakhiwa sokwakhiwa cishe kwe-4.000 sqm futhi esihlala kuyo uqobo ifektri ye-pellet ka-500 sq.m.
ungqa okuyisakhiwo esidala sokhuni lapho kugcinwa khona futhi kuthengiswa ngqo ama-pellets emasakeni amancane namasaka amakhulu.
Indawo yokusebenzela equkethe izikhala zabasebenzi, izindawo zokusebenzela kanye nezindawo zokugcina izimpahla.
Ehhovisi okubandakanya nehhovisi lemenenja yendawo kanye negumbi labasebenzi abengeziwe bokuphatha kanye negumbi elikhudlwana elenzelwe njengegumbi lokubonisa ukushisa nge-pellet.
Isigubhu sokumisa sidingwa nge-burner e-powder eqalelwa ngamafutha okushisa kepha kuthi ngemuva kwesigaba sokushisa i-100% iqhutshwe ku-powwoodokhuni. Isigubhu somisa se-rotary esingamamitha ayi-10 ubude futhi siqukethe abashayeli be-angular ukulungisa ijubane lokuphuma kwesigubhu. Izinga lokushisa elomile kuhhavini lingama-350 degrees. Umthamo wokomisa ngamathani ayi-5 wokuhanjiswa kwamanzi ngehora.
Ngemuva kokumiswa, impahla ihamba ngesivunguvungu iye esikhungweni sesando ngamapuleti we-2 mm wokusiza. Lapha, okuqukethwe kuhlukaniswe ngaphambi kokuya emishini yokunyathelisa ye-pellet.
Isitshalo sinezingcindezi ezi-3 ze-pellet ezenziwe yi-CPM. Imishini emibili yokucindezela ama-pellet amathani ama-3 / h nge-pc eyodwa futhi encane ye-1 ton / h. Enye yemishini emikhulu yintsha futhi yafakwa ekwindla ka-2003.
Siphinde sibe nesakhiwo eH Hova esithengiswayo.